Soo iibso budada Gestodene (60282-87-3) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Gowrado Dumar ah / Duufaanta Gestoden (60282-87-3)
SKU: 60282-87-3. Category: Gowrado Dumar ah
AASraw waxaa la leh awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaam qiyaasta budada Gestoden (60282-87-3), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada Gestoden, Nooca Femoden, Femodene, Femodette, Gynera, Harmonet, Lindynette, Logest, Meliane, Millinette, Minesse, Minulet, Mirelle, iyo Triadene iyo sidoo kale kuwa kale. Gestodene waa hormoon ka hormoon hormoonka hormoonka ah. Waxyaabaha ay ka kooban tahay gestoden waxaa ka mid ah Meliane, kaas oo ku jira 20 mcg of etinylestradiol iyo 75 mcg ee gestodene; iyo Gynera, oo ku jira 30 mcg of ethinylestradiol iyo xNUMX mcg ee gestodene.
Fiidiyowga budada gestoden
Budada Gestoden Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Budada Gestoden
Formula kelli: C21H26O2
Miisaankani waa: 310.43
Dhibcaha Biyaha: 190-192 ° C
Saamaynta budada Gestoden
Magacyada Kimikalka: Budada Gestoden
Magaca: Femoden, Femodene, Femodette, Gynera, Harmonet, Lindynette, Logest, Meliane, Millinette, Minesse, Minulet, Mirelle, iyo Triadene, iyo kuwo kale
Isticmaalka budada Gestoden
Kiniiniga Gestoden waa borogaraam aad u sareysa, sidoo kale wuxuu leeyahay lahjad maskaxeed oo daciif ah, antimineralocorticoid, iyo dhaqdhaqaaqa glucocorticoid.Haddii uu firfircoonidiisa progestogenic, wuxuu leeyahay antigonadotropic iyo saameynta antiestrogenic.
Bioavailability budada Gestoden waa 87 ilaa 100%. Si ka duwan noocyada kale ee jiilka sadexaad sida progestins sida desogestrel iyo nogogasho, budada Gestoden maaha wax horudhac ah. Qaybta nafaqada noolaha waa 12 saacadaha 14.
Faa'iidooyinka qaadashada budada Gestoden (Femoden) waxaa ka mid ah:
waa mid ka mid ah hababka ugu kalsoon ee lagu kalsoon yahay ee ka hortagga uurka haddii loo isticmaalo si sax ah
ma joojiso galmada
waxay caadiyan ka dhigeysaa caadooyinkaaga joogtada ah, kuwa fudud oo aan xanuun lahayn
waxay ka caawin kartaa calaamadaha hore ee caadada.
Dufanka Gestoden (Femodene) kuma ilaalin doono cudurrada galmada lagu kala qaado, sida Chlamydia ama HIV. Kondhom oo keli ah ayaa kaa caawin kara sidaan.
Femodene ayaa loo baahan yahay in la qaato sidii loogu talagalay si looga hortago uurka.
Waa maxay qiyaasta budada Gestoden
U qaado budada Gestoden iyo etinylestradiol sida ku qoran dhakhtarkaaga. Si taxadar leh u raac tilmaamaha ku qoran warqadda daawadaada.
Daawada budada Gestoden iyo Ethinylestradiol takhtarkaaga ayaa kugula talin doona inay ku saleysnaadaan kuwan soo socda (isticmaal ama wax kasta oo khuseeya):
Budada Gestoden Iyo Ethinylestradiol waxaa laga helaa qiyaasaha soo socda:
Desogestrel-ethinyl Estradiol 0.15 Mg-0.03 Mg Tabeel Afar
Desogestrel-ethinyl Estradiol Lip Tablet Tablet
Desogestrel-ethinyl Estradiol Tablet Afka Afafka
Drospirenone-etinyl Estradiol 3 Mg-0.02 Mg Tabeel Afka
Drospirenone-etinyl Estradiol 3 Mg-0.03 Mg Tabeel Afka
Drospirenone / etinyl Estradiol / levomefolate Byphasic 3 Mg-0.02 Mg-0.451 Mg Afka Meelaha
Drospirenone / etinyl Estradiol / levomefolate Byphasic 3 Mg-0.03 Mg-0.451 Mg Afka Meelaha
Ethinyl Estradiol 0.02 Mg Tabeel Afka
Ethinyl Estradiol 0.05 Mg Tabeel Afka
Ethinyl Estradiol 0.5 Mg Tabeel Afka
Ethinyl Estradiol-ethynodiol 35 Mcg-1 Mg Tabeel Afar
Ethinyl Estradiol-ethynodiol 50 Mcg-1 Mg Tabeel Afar
Ethinyl Estradiol-etonogestrel 0.015 Mg-0.120 Mg Wajiga
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel 0.05 Mg-0.25 Mg Afka Wareegga
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel 30 Mcg-0.15 Mg Afka Wareegga
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Byphasic Wareegga Wareegga Wareegga
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Cycle 30 Mcg-0.15 Mg Oral Tablet
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Low Dose Bisadha Wareegga Wareegga Wareegga
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Quadriphasic Wareegga Wareegga Wareegga
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Tababarka Afka Afafka ah
Ethinyl Estradiol-norelgestromin 20 Mcg-150 Mcg / 24 Hr Transdermal Film, Siidayn La sii Saaray
Ethinyl Estradiol-norgestrel 50 Mcg-0.5 Mg Tabeel Afar
Sidee u shaqeeyaa budada Gestoden
Kiniiniyada Femodene waa nooc ka mid ah hormoonnada hormoonnada ee loo yaqaan 'pill' ama kiniiniga ka hortagga uurka. Kiniiniyada Femodene waxay ka kooban yihiin laba qaybood oo firfircoon, etinylestradiol iyo budada Gestoden. Kuwani waa noocyada synthetic ee dabiiciga ah ee hormoon dumarka, estrogen iyo progesterone. Ethinylestradiol waa nooca synthetic ee estrogen iyo budada Gestoden waa 'seddexaad' dabeecada synthetic ee progesterone.
Ka-hortagga uur-qaadidda ee isku-dhafan sida Femodene oo shaqeyneysa iyada oo ay ka badan tahay raacitaanka caadada caadiga ah. Wareegga caadada dumarka caadiga ah, heerarka hormoonada jinsiga isbeddela bil kasta. Hormoodka ayaa keena ukun ah in laga sii daayo ugxan-yaryaha (ugxantu) iyo u diyaarinta xuubka ilmo-galeenka uurka suurtogalka ah. Dhammaadka wareegga kasta, haddii ukumaha aan la dillaacin heerarka hormoonnada, waxay keenaysaa in ilmagaleenka la daadiyo mudo bil ah.
Qiyaasta maalin walba ee hormoonnada lagu sameeyo kiniinka kiniiniga ah badi ahaan iyada oo lagu xakameynayo jirkaaga inaad ku fikirto in qaniinyada hore u dhaceen. Tani waxay ka hortagtaa ukun ah in uu ku faafayo oo laga sii daayo ugxan-yari bil kasta.
Hoormoonku waxay sidoo kale kordhisaa dhumucda qoyaanka dabiiciga ah ee qoorta ilmagaleenka, taas oo adkeyneysa shahwadu inay ka gudubto hoosta ilmagaleenka waxayna gaari kartaa ukun. Waxa kale oo ay bedelaan tayada xuubka ilmagaleenka (endometrium), taas oo ka dhigeysa in ay yar tahay in ukunta bacriminta uu meeshaas ku dhejiyo.
Ethinyl Estradiol / Dufanka Gestoden wuxuu u dhexeeyaa qaybta X:
Waxaa la muujiyey in dumarka qaata budada Ethinyl Estradiol / Gestoden inta uurka laga yaabo inay dhalaan dhibaatooyin. Ma jiraan xaalado ay faa'iido u leedahay daaweynta hooyada oo aad uga culus halista waxyeellada ilmaha. Daawooyinkaan waa in aan marna loo isticmaalin haweenka uurka leh.
Suuq-geynta Sheyga Gestoden
Daawada budada Gestoden waxay leedahay wax saameyn ah
Dhibaatooyinka soo raaca budada Gestoden waxaa ka mid ah:
Madax xanuun, isbeddelka jidhka, isbedelka / isbedelka niyadda, xanuunka naaska ama jilicsanaanta, isbedelka libido. Xanuun GI sida lallabbo iyo xanuunka caloosha.
Sida loo iibsado budada Gestoden laga bilaabo AASraw
Macmacaanka budada ah ee Gestodiin:
Budada Gestodene ee iibka: 10 waxyaabo laga ogaado budada Gestoden